Website Cusub oo ka duwan kuwii hore oo Hawada soo galay. - Caasimada Online
Home Warar Website Cusub oo ka duwan kuwii hore oo Hawada soo galay.
Website Cusub oo ka duwan kuwii hore oo Hawada soo galay.
Dhamaan waxaa lagu wargelinayaa bulshada Somaliyeed in hawada uu kusoo biiray Website afka Soomaaliga iyo afka English-ka wax ku qora si deg deg ahna usoo gudbinaya dhacdooyinka Soomaaliya iyo Caalamkaba.
Webkaan oo la magac baxay www.somaliawitness.com ayaa waxa uu yahay mid ay akhristayaashiisu ka heli doonaan warbixino u badan dhacdooyinka markaasi taagan, arimaha layaabka, diinta, dhaqanka iyo waxyaabaha dahsoon oo bulshada usoo bandhigi doono.
Waxaa ka howlgalaya Webka www.somaliawitness.com saxafiyiin ku taqasusay qorista wararka iyo warbixinada waxaana ay mar waliba soo bandhigeysaa warar hufan oo xaqiiq ah.